Kugovewa Kwenyika Yacho—Chiratidzo chaEzekieri
BHOKISI REKUDZIDZISA 20A
Kugovewa Kwenyika Yacho
Tsanangudzo yemiganhu yakanyatsoyerwa nemazvo yakapa vaIsraeri vaiva kuutapwa chivimbo chekuti vaizodzokera kunyika yavo yavaida zvikuru. Zvidzidzo zvipi zvatinogona kuwana pachiratidzo ichi mazuva ano? Ona zvinhu zviviri zvatinodzidza pachiratidzo chacho:
Kuwana kwemunhu wese nzvimbo yake uye kuva nebasa rinokosha
Mumwe nemumwe wenhapwa dzaizodzoka aizowana nhaka muNyika Yakapikirwa. Zvakadaro zviri kuitikawo mazuva ano muparadhiso yemweya; vashumiri vese vaJehovha vane nzvimbo mairi. Pasinei nekuti tinoita basa rei musangano raJehovha, tese zvedu tine nzvimbo yedu uye tine basa rinokosha muparadhiso yemweya. Jehovha anokoshesa vashumiri vake vese zvakaenzana.
Muchiratidzo chaEzekieri, nharaunda yega yega yemuNyika Yakapikirwa yaiita kuti vagari vemo vave nemikana yakaenzana yekuwana makomborero enyika iyi. Ndizvowo zviri kuitika mazuva ano; Jehovha anopa vashumiri vake vese mikana yakaenzana yekuwana makomborero emuparadhiso yemweya.
Chitsauko 20, ndima 5-11
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kugovewa Kwenyika Yacho